Iyo yakanakisa midhudhudhu mitambo yePC | Gadget nhau
Iyo yakanakisa midhudhudhu mitambo yePC
Paco L Gutierrez | 27/03/2021 18:30 | General, videogames
Midhiya yevhidhiyo mitambo pasina mubvunzo ndiyo inonyanya kufarirwa pakati peanonyanya kuda zvekumhanyisa uye adrenaline, pakati peyakanyanya kuridzwa inogara iri mamiriro emota mitambo yemavhidhiyo, asi ko kana izvo zvatiri kuda kudzikisa kushushikana kwedu kwese kumashure kwemudhudhudhu? Tine dzakasiyana siyana sarudzo patinosarudza mutambo upi wekutamba nawo, asi zviri pachena wakaderera pane iyo katarogu yatinowana maererano nemotokari dzemitambo yemavhidhiyo.
Tine zvakasiyana pakati pemienzaniso mishoma iriko, sezvo isu takaita kubva kune simulators emakwikwi epasikoro epasi rose, kune motocross, uko kusvetuka kukuru uye skid pamadhaka zvinomira. Panyaya iyi, peripheral yakasarudzwa kutamba ndiyo iri kure control, nekuti chidhiraivho chaisazove chakakodzera kwazvo kutyaira mudhudhudhu, uye zvinonetsa kuwana replica yemudhudhudhu ine swingarm yekushandisa mudzimba. Muchikamu chino tiri kuenda kune zvakadzama izvo zvakanakisa mitambo yemidhudhudhu yePC.
1.1 Maitiro epamhepo
2.1 Maitiro epamhepo
3 Tasva 4
3.1 Maitiro epamhepo
4.1 Maitiro epamhepo
Iyi ndiyo simulator yemudhudhudhu yakavakirwa paMotoGP World Championship, ine zvakafanana zvakafanana nezvikomo izvo zvatinoona mumakwikwi chaiye nevatasvi vakafanana, sezvo iri saga yegore negore iri kuramba ichienderera pakati peshanduro, saka tinosarudza vhezheni yatino sarudza iyo Gameplay ichave yakafanana chaizvo. Ehe, zvinoratidza kuti studio inoteerera vateveri vayo, saka tichaona yakagadziriswa zvikanganiso zvakawanda zvakaonekwa muzvikamu zvakapfuura, mukuwedzera kune yakavandudzwa graphic chitarisiko.
Kunyangwe zviri pachena, chinhu chikuru pamutambo uyu wevhidhiyo ndechekuti zvese zvirimo zvinoonekwa zviri pamutemo, nekutenda rezinesi reNdebe yeNyika, tichava nezvikwata chaizvo, vatyairi, midhudhudhu nemaseketi. Izvi hazvisi zve nyika chete iyo yekutanga kirasi, isu zvakare tine zvese zvatingaone muMoto2, Moto3 uye 500cc maviri-maronda uye nhoroondo MotoGP ina-sitiroko kana iyo nyowani yeMotoE modhi.
Isu zvakare tinosimbisa yakakwana basa modhi iyo inotibvumidza isu kusaina timu chaiyo kana kugadzira yedu yega. Panzvimbo pekuita nhevedzano yemadzinza pasina zvinokurudzira, pamusoro pekukwikwidza, isu tinofanirwa kubata akasiyana maficha ehunyanzvi basa redu sevatyairi, kusanganisira vanotsigira, kusaina vashandi kana kushandura gomo redu.
Tine online mode yevatambi gumi nevaviri iyo yakabatanidzwa uye inogona kunakidzwa nenzira dzakasiyana, senge kupokana makwikwi eruzhinji neakazvimirira kana kunyange kusarudza kukwikwidza mumwaka mutsva weSport. Zvese izvi nemaseva akazvitsaurira anovimbisa iyo yakakwana mamiriro ekutamba pasina lag. Uyu mutambo unovandudzwa zvishoma nezvishoma nevagadziri vawo saka unovandudzwa neimwe yeatches.
Motocross mutambo uyo wakazoona mwenje kunyangwe hosha, mutambo unochengetedza hunhu hwese hwakatangira asi hunovandudza zvakanyanya muchikamu chemifananidzo. Ndiwo mutambo wekutanga watinogona kutamba saJorge Prado, mutyairi weGalician anomiririra Spain mumutambo uyu. Ruzha rwema ambient runoenda nhanho imwe kumberi uye rwunodzokorodza ruzha rwemidhudhudhu sezvisina kumboitika semanzwi uye kurudziro yeruzhinji kune vatyairi.
Zvingave sei zvimwe, mutambo uyu unosanganisira iwo 19 macircuit anoumba mwaka 2020 mwaka mushure mekusanganisira Lommel naXanadu zvakadzama. Tine zvatinogona iyo 68 vatyairi vemapoka akasiyana, kubva pa250cc kusvika ku450cc pamwe nezvinhu zvinopfuura zviuru gumi zvepamutemo zvinhu zvekushongedza ese aesthetics uye mashandiro emudhudhudhu wedu.
Haisi kumashure kumashure maererano nemamodhi modhi anosanganisira echinyakare Basa, Grand Prix, Nguva Yekutongwa uye Championship. Mune iyo trajectory mode chinangwa chedu chinenge chiri chekutangira kubva kwakaderera needu pachedu mutyairi watinozogadzirisa zvatinoda uye isu tichava neruzivo uye nevatsigiri kukwira kumusoro.
Iyo yemidhi yakawanda haigone kushayikwa, ichivandudza zvikuru chikamu ichi kusanganisira pakupedzisira iyo vakazvipira maseva. Izvi zvinobvumira mimwe mitambo inoyerera isina lag inotyisa inoparadza mujaho. Isu zvakare tine Race Dhairekitori modhi kuti tigadzire isu pachedu makwikwi uye kuatepfenyura pachedu nekupa makamera.
Saga yevagadziri veMotoGP iyo inopa chiono chakasiyana cheicho mudhudhudhu mujaho, kudhonza kwechiratidzo chisiri chakakomba. Ngatitaurei kuti iko kushanya kukuru kwemidhudhudhu, kubheja pane simulation uchishandisa chero chero mudhudhudhu wemugwagwa watinogona kufungidzira.
Muchikamu chayo chechina tinowana yakagadziridzwa mifananidzo yakajeka inouya kuzadza chizvarwa chinotevera PS5 uye Series X consoles pamwe nemaPC ane simba kwazvo. Kwenguva yekutanga isu tichaona inotarisirwa mamiriro ekunze ane simba, ayo anotibvumidza isu kuti titange mutambo uine makore ane makore uye nekupedzisa kuchinaya zvakanyanya. Husiku nehusiku kutenderera kunosanganisirwawo kuti titange mijaho masikati toipedzisa kwadoka.
Maitiro emutambo haasiyane zvakanyanya neakautangira uye ndeekuti isu tinotanga mune yebasa modhi uko kwedu kwekutanga sarudzo irinharaunda yedunhu ratiri kutarisira kutanga sehunyanzvi. Zvichienderana nezvatinosarudza, isu tichamhanya mune imwe kana mamwe macircuit matichafanirwa kupasa bvunzo dzakasiyana kuti tikwire. Mutambo uyu urikuda maererano nekutamba uye unopa kwechokwadi kwakawanda asiwo kuomarara kwakanyanya kana tichida kubata iyo gomo nekumhanya kuzere.
Tine garaji nemari yatinogona kuwana apo isu tichifambira mberi kuburikidza nemutambo, chinangwa chedu ndechekuzadza iri garaji nemidhudhudhu yeavo vese vakatama uye uvandudze iwo kusvika pakakwirira. Sezvo isu tichifambira mberi mumutambo tichazviitira mukurumbira uye izvi zvichatipa mukana wekusvetukira muligi repasi uye maSuperBikes epasi rese.
Iyo mudhudhudhu katarogu inosvika kune chimiro che 175 yepamutemo maMoor kubva kune makumi maviri nevaviri vagadziri, kubva muna 1966 kusvikira zvino. Kune rimwe divi tinowana kurova 30 maseketi chaiwo, akatangazve kurukutika. Chikamu chemifananidzo chakachengetwa zvine hungwaru, kuverenga pane 3d laser scanning kune ese maviri makomo uye vatyairi. Mifananidzo yevatasvi uye midhudhudhu inofamba ndeyechokwadi, ichijekesa nguva uye tarisiro yakapihwa kuchikamu chinoonekwa.
Mutambo uyu une nzira yakapusa pamhepo ine mashoma modhi yemitambo, asi iwo anozove muyedzo wakaoma litmus kuratidza kuti ndiani mutyairi akanakisa pamambure mumitambo ine vatambi vanosvika gumi nemaviri pasi rese. Huwandu hukuru hwemamodhi hwashaikwa, pamwe neyakaganhurirwa-skrini revatambi vakawanda.
Izvo zvinofanirwa kukosheswa ndezvekuti isu takazvipira maseva, saka iko kuyerera uye mhando yemitambo ichave yakanaka. Muzhinji mutambi akawanda akanaka uye anoshanda nemazvo, kunyangwe isu takasiiwa nekunakirwa kunorwadza kana isu tichifunga nezve chiyero chemusoro wenyaya uye nekuchengetwa kwakapihwa kune zvimwe zvikamu.
Iyo quintessential motocross mutambo unotsigirwa neMonster brand yezvinwiwa matinowana vatyairi, maseketi uye zvikwata zvepamutemo zvemakwikwi eAmerica. Chimwe chinhu chinomira pakati pezvimwe zvese ihurefu hwekugadzirisa hwatinowana mune iri zita. Tinogona kusarudza pakati pezvakasiyana dhizaini, mabhureki, mavara eheti, magirazi, bhutsu, vadziviriri, zvitambi ... Kana tsanga dzakateedzana dzapera, tinosvika pakushanda pachinangwa chedu chekusvika pamusoro.
Tiri kutarisana nemutambo uyo pasina kuve yakachena simulator, haisi yakakwana arcade, saka kuteedzera iwo ezvidzidzo zvakanyatsonaka kuchatibatsira zvakanyanya patinotyaira. Iko hakuna kuomarara modhi, saka iyo yakaoma curve ichave inofambira mberi, kubva pakutanga hazvisi nyore kuhwina mujaho, asi zvinhu zvichawedzera kuenderera mberi. Hazvizove nyore kuti bhasikoro rimire kana, saka zvichave zvakajairika kwatiri kuti tirove pasi nekukanganisa zvishoma.
Tine modhi inonzi Complex, patinowana nharaunda dzinovakirwa pazvitsuwa zveMaine, matinozonakidzwa nemakiromita ekutyaira kwemahara kuyedza hunyanzvi hwedu. Isu zvakare tine mamwe maseketi eSuperCross uye imwe yeMotoCross kwaunogona kutora chikamu neshamwari.
Chikamu chemifananidzo chinoenderana nePC yatinayo, asi kana tiine muchina wakanaka, tichafadzwa nemitambo yemvura ine mifananidzo yakanaka., magadzirirwo uye kurodha nguva zvakagadziridzwa. Kunyanya kutaurwa kune fizikiki yemidhudhudhu uye kunyanya nzira. Mamwe macircuit ane madhaka ane huso, uko mabhasikoro edu achasiya nzira dzawo uye skid ichimwaya matope. Mifananidzo yacho inofambidzana neruzha rwenzwi, iyo inosimbisa dombo uye ruzha rwekutinhira rwepombi dzechiutsi.
Apa ndipo patinogona kuwana shoma nhau, nekuti iyi nzira yevazhinji haina kuchinja zvakanyanya kana ichienzaniswa neyakatangira, asi tinogona kunakidzwa nemitambo ine vatambi vanosvika makumi maviri nevaviri. Mutambo une maSeva akazvitsaurira ayo anodzivirira kutambura marara asingatarisirwe kana kubatika chero bedzi kubatana kwedu kuchititendera kuti tidaro. Tinogona kuronga makwikwi pakati penharaunda neiyo Race Director modhi, kwatinozove varongi uye isu tinogona kutepfenyura mukwikwi nemhando yepamusoro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » Musha » videogames » Iyo yakanakisa midhudhudhu mitambo yePC
Crosscall Core-T4 iyo pese-pevhu piritsi [Kuongorora]
Jabra Elite 75t, kuongororwa kwechigadzirwa chakakomberedza